ရခိုင်လူမျိုးမှာ ကုလားမရှိပါ ~ ဆုံနေကြ
မလေးရှား - ဖြန့်ဝေခြင်း
ဆုံနေကြ မှ လာရောက်ကြသော မိတ်ဆွေများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်..
လူထုနဲ့ တိုင်းပြည်သာကောင်းစားအောင်လုပ်ပေး ဘယ်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ပါတီပဲဖြစ်ဖြစ် ထောက်ခံတယ်
Thursday, December 08, 2011 လပြည့်ဝန်း No comments
နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ပေါ်ပေါက်လာပုံ
ရခိုင်ဆိုသော စကားသည် ပါဠိ စကားမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ရက္ခိတ (အမျိုးကို စောင့်ရှောက်သူ) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
ပျူ နှင့်အနွယ်တူ ကမ်းယံ လူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဒေသဘက် သို့ဝင်ရောက်သည့် အချိန်ကာလ လောက်မှာပင် အနောက်တိဗက်အနွယ်ဝင် အခြား လူမျိုးစုများသည်လည်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းဒေသ များဘက်မှ ၀င်ရောက်လာကြသည်။ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သမိုင်းများကို လေ့လာသည့် အခါရှေးအကျဆုံး မင်းဆက်များနှင့် တိုင်းပြည် နယ်ပယ်များသည် စစ်တွေပတ်ဝန်းကျင် ဒေသတ၀ိုက်လောက်တွင် အခြေခံသည်ကို အများဆုံးတွေ့ရှိရသည်။
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတောင်ပိုင်း ဒေသများ သို့ဝင်ရောက် ခြေချသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပျူနှင့် အနွယ်တူကမ်းယံ လူမျိုးများ သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း အရပ်ဒေသများမှတဆင့် ၀င်ရောက် လာဖွယ်ရာရှိသည်။ ရခိုင်ရာဇ၀င်ဟောင်းများ၌ ရေးသား ဖေါ်ပြထားသည်မှာ ဗုဒ္ဓပွင့်တော် မမူမှီ လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ပေါင်း ၅၀၀၀ ကျော်လောက်မှ စ၍ဓည၀တီ ကို တည်ထောင်သည့် မာရယု မင်းဆက် ၅၄ ဆက်မျှ စိုးစံခဲ့ကြောင်း ဒုတိယအကြိမ် ဓည၀တီကိုတည်ထောင်သည့်ကံရာဇာကြီး မင်းဆက် ၂၉ ဆက်မြောက် စန္ဒသူရိယမင်းသည် ဗုဒ္ဓနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ပြီး မဟာမုနိရုပ်ပွားတော်ကို သွန်းလုပ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသား ဖေါ်ပြကြသည်။
ရခိုင်ကမ်း ရိုးတန်းဒေသတ၀ိုက်တွင် တွေ့ရှိရသည့် သမိုင်းဝင်ထောက်အထားများအရ ပုဂံပြည် မတိုင်မှီ ရာစု နှစ်များစွာကပင် တိုင်းပြည် မင်းဆက်များ ထူထောင်ပြီးစီးကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အထူးသဖြင့် ဓည၀တီ၊ ဝေသာလီနှင့် လောင်းကြက် ပြည်များသည် သူ့ခေတ်နှင့် သူ့အခါ ထင်ရှားကြီးကျယ် သည့် တိုင်းပြည် များဖြစ်ခဲ့ကြသည်။
မြောက်ဦးခေတ် ရောက်သောအခါ ရခိုင်ဘုရင်များသည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသတ ခုလုံးကိုစည်းလုံး သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ရုံမျှမက၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ စစ်တကောင်းဒေနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တြိပူရ ဒေသများကိုပါ နှစ်ပေါင်း ရာနှင့်ချီ၍ သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ကြသည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ကို စတင်စည်းရုံးခဲ့သည့် ပုဂံမင်းဆက်ဘုရင်များသည်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ မြန်မာနိုင်ငံကို ထူထောင်သည့် ဘုရင့်နောင်သည်လည်းကောင်း၊ တတိယမြန်မာနိုင်ငံကို စည်းလုံးတည်ထောင်သည့် အလောင်းဘုရားသည် လည်းကောင်း ရခိုင်ပြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်ပယ် တစ်ခု အဖြစ်သို့ မသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့ကြချေ။ီရခိုင်သည် ၁၈၇၄ ရောက်မှသာ ဘိုးတော်ဗဒုံမင်းလက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပါဝင်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့ သည် ရခိုင်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာဘာသာစကားကို အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။
ရခိုင်ဘာသာစကားနှင့် မြန်မာ ဘာသာစကားသည် အတော်များများတူပြီး ရ-သံ /r/ နှင့် ယ-သံ /j/ ထွက်ကွာသည်။ ရခိုင်စာပေ အရေးအသားနှင့် မြန်မာစာပေး အရေး အသားသည် ဆင်တူသည်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့သည် များသောအားဖြင့် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြသည်။
သူတို့သည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ပထမဦးဆုံးသော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုသည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ အခြေခံထား၍ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။
ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ စာပေ၊ ဂီတ နှင့် အနုသုခုမပညာရပ်တို့သည် ဘာသာရေးကို အခြေခံပြီး တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ကျင် အားကစားနှင့် ရခိုင်ဆီမီးခွက်အကတို့သည်ထင်ရှားသည်။
အကျယ်အ၀န်း ၁၄၂၀၀ စတုရန်းမိုင်ခန့်
လူဦးရေ ၃.၈၃၆ သန်းခန့် (၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် စာရင်း)
ခရိုင် ၅ ခရိုင်
မြ်ို့နယ် ၁၇ မြို့နယ်
၁၉၈၂ မြန်မာနိုင်ငံသား အက်ဥပဒေအရ၊ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုထားသော၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅) မျိုးတွင် ပါဝင်သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လူမျိုး နှင့် မျိုးနွယ်စု (၇) မျိုးမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သည်။
2. ကမန် မျိုးနွယ်စု
3. ခမွီး မျိုးနွယ်စု
4. ဒိုင်းနက် မျိုးနွယ်စု
5. မရမာကြီး မျိုးနွယ်စု
6. မြို မျိုးနွယ်စု
7. သက် မျိုးနွယ်စု
ရခိုင်ရာဇ၀င် ။ အောင်သာဦး
စန္ဒမာလာလင်္ကာရ။ ရခိုင်ရာဇ၀င်သစ် ရခိုင်သမိုင်း ၊ ၁၅ ၊ ၁၈ ရာစု
မြန်မာရာဇ၀င် (ဟာဗေး ၁၉၂၅)
မိတ်ဆိနာ-ခေတ်ဦး ဖုနန်-ဖန်-ပျူ နှင့် ရခိုင် ယိုးဒယားသင်း ဂျာနယ်။
* ရခိုင်ဂီတ ဒေါ့ကွန် 
Anti Rohingya - Anti Terrorist Blog
Posted in: ဖြန့်ဝေခြင်း
ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ (Honorary Doctor of Civil Law)
" လူတစ်သန်းကြိုဆိုရေး သီချင်း "
သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်း၏ အမှတ်ရစရာ ပြောကြားချက်များ
DVB TV သတင်းစဉ်
RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်
မြန်မာစံတော်ချိန် နှင့် မြန်မာပြက္ခဒိန်
တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဘ လို့ ပြောနေသူများအတွက် ယနေ့ပြောင်းလဲလိုက်သော စကားရပ်
နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ထောင်ကျခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေ၊ ယခုတိုင်အောင် ထောင်ထဲမှာ ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့သူတွေအားလုံးကို ဓာတ်ပုံ နဲ့ နာမည်ကိုပါ တစုတစည်းတည်း ဖော်ပြထားတာပါ။ ဓာတ်ပုံပေါက်ကို ကလစ်မလုပ်ပဲ မောက်စ်ကို တင်လိုက်ရင် ဓာတ်ပုံက တဖက်လှည့်သွားပြီး ဓာတ်ပုံရှင်ရဲ့ အမည်ပေါ်လာတယ်။ ဓာတ်ပုံပေါ်ကို ကလစ်လုပ်လိုက်ရင် အဲဒီဓာတ်ပုံရှင် နဲ့ ပက်သက်တဲ့ သတင်းတွေပေါ်လာတယ်။ လုပ်ထားတာလေးက တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ သေသေသပ်သပ်ရှိတယ်။ ပြန်လည်မျှဝေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ရှယ်လိုက်တာပါ။ CLICK HERE -နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အဘိဓာန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒုက္ခသည်စခန်း သွားရောက်ကြည့်ရှု့မယ်လို့ Bangkok Post ဖော်ပြ
Photo courtesy of TBBC ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ ကရင်ဒုက္ခသ...
ရခိုပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်မှုခံလိုက်ရသော ဒေသခံများအတွက် ဦးတေဇ ဘဏ်က အလှူ
AGD Bank (အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက်) ရဲ့ အင်တာနက် လူမှုကွန်ရက် ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားပါတယ်။ ရခို...
သမီးဘောင်းဘီ ဆရာကြီး ခိုးသွားတယ်
သမီးဘောင်းဘီ ဆရာကြီး ခိုးသွားတယ် ဇော်ကြီး (ပေါက်တော) လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်က “အားနွဲ့တဲ့ မိန်းမသားပါရှင့် ... ဒီလောက် ဓာ...
တိုက်ပွဲ ၆ လအကြာတွင် ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များထံသို့ နိုင်ငံတကာ သွားရောက် ကူညီ – Kachin refugess get UN relief
မိုးမခအထောက်တော် အမှတ် ၀၀၂ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားပြီး ၆ လအကြာတွင် အရေအတွက် သုံးသောင်းခန့် ရှိမည့် ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များထံသို့ နိုင်ငံတကာ...
ပန်းငုံလေးတွေ ပွင့်ကြပါစေ …
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခန်းပေါင်း နှစ်ဆယ် ပါဝင်သည့် ခပ်လတ်လတ် ဟိုတယ်တခုထဲသို့ စုံတွဲတတွဲ ၀င်လာသည်။ ညနေ လေးနာရီဝန်းကျင်။ ဟိုတယ်အ...
အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာအကျိုးရှိနိုင်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ အန်တီအမြင်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တကယ် အကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရေး၊ မဖြစ်ရေးမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူတွေက ကျေနပ်ရေး၊မကျေနပ်ရေးပဲဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေကငါတို့ရဲ့ နိုင်ငံဟာ တိုးတက်လာတယ်။ ငါတို့ရဲ့ဘ၀တွေဟာကောင်းမွန်လာတယ်ဆိုတာကို ခံစားရပြီဆိုရင် ဘယ်ဥက္ကဋ္ဌရာထူးနဲ့မှ နှိုင်းလို့မရတဲ့ဆုလာဒ်တစ်ခုပဲလို့ အန်တီကတော့ ဒီလိုပဲ မြင်တယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)
2008 Myanmar Constitution (အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ) ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြချက်စာအုပ်
"အစိုးရအဖွဲ့ သစ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ် (Good Governance)နဲ့ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ (Clean Government) ပေါ်ပေါက်လာအောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း လုပ်ဆောင်ဖို့ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။" -နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်
မလေးရှား - ဖြန့်ဝေခြင်း (4)
မလေးရှား -ပေးစာ (1)
မလေးရှား သတင်း (19)
နိုင်ငံတကာ သတင်း (96)
Fitur Workshop Mode Mungkinkanmu Membuat Mode Baru di Overwatch
ဘလော်ဂါနေဘုန်းလတ် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ နှင့် ၆ လ ချမှတ်ခံရသည့် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ (photo: minnyoonthit)
နေဘုန်းလတ်ကို ထောင်ချပြီးတည်းက သူ့သတင်းတွေကို အင်တာနက်မှာ တွေ့နေရတယ်။ တချို့က မှန်တယ်၊ တချို့က မမှန်ဘူး။ မမှန်တာတွေ ရေးထားတာကို ဖတ်ရတိုင်း ... အနှစ် ၂၀ စွန်း ဆိုတာကို ရင်ဆိုင်နေရသူအတွက် အချက်အလက် အမှန်တွေ ရေးဖို့ အားထုတ်သင့်တယ်။ တကယ်တော့ ခုလို ထောင်ချခံရလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မတို့ အားလုံး လုံးဝ မထင်မှတ်ခဲ့မိဘူး။ နေဘုန်းလတ် ကိုယ်တိုင်တောင် ထင်မိခဲ့လိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူး။
ကျွန်မ အမြင်မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် သူတို့ ရှေ့မှာရှိတဲ့ သူတို့အတွက် ဆူးညှောင့်ခလုတ်တွေ အားလုံးကို ဖယ်ရှားလိုက်တာပါပဲ။ အင်တာနက် ရေစီးကြောင်းပေါ်မှာတော့ နေဘုန်းလတ်ဟာ ပထမဆုံးသော ဓားစာခံ ဖြစ်သွားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာ သူ့ကိုသုံးပြီး တခြားသူတွေကို အနှစ် ၂၀ ဆိုတာနဲ့ ခြိမ်းခြောက်လိုက်သလိုပဲ။ ဘလောဂ့်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လိုက်မယ့် ကျွန်မတို့ရဲ့ အတွေးတိုင်းမှာ အဲဒီ အနှစ် ၂၀ ဆိုတာကြီး ကပ်ပါနေအောင် အကွက်ဆင်လိုက်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အတွက်တော့ အဲဒီ အနှစ် ၂၀ ဆိုတာ အသက် ၂၀ ကျော် ကောင်လေးတယောက်အတွက် ယူကျုံးမရ ဖြစ်စရာ၊ စိတ်ထဲ ဒေါသထွက်စရာ မခံချင်စရာပဲ။
ကျွန်မသိတဲ့ နေဘုန်းလတ်ဆိုတာ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့၊ လွတ်လပ်မှုကို ခုံမင်တဲ့၊ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်မယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ရင့်ကျက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ သာမန်လူငယ်တယောက်ပဲ။ သူဟာ ပရဟိတတွေဘက်မှာလည်း အားကြိုးမာန်တက် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ လေးစားစရာ လူငယ်တယောက်လည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့အတွေးတွေထဲမှာ သူချစ်တဲ့ စာပေအနုပညာ ဓာတ်ပုံပညာတွေလည်း စီးဆင်းနေတယ်။ သူဟာ လူငယ်စိတ်နဲ့ ပေါ့ပါး လွတ်လပ်စွာ နေထိုင် သွားလာတတ်တယ်။ သူ့ဘလောဂ့်တွေကို သူနှစ်သက်တဲ့ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေနဲ့ ဖန်ဆင်းထားတယ်။ သူဟာ ကျွန်မ ခင်မင် ယုံကြည်မိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တယောက် ဖြစ်တယ်။
နေဘုန်းလတ်ကို ကျွန်မတို့ သိကြတယ်။ သူ့အတွက် ခံစားကြရတယ်။ တကယ်တော့ ကျွန်မတို့ မသိတဲ့လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်တောင် ဒီလို ယုတ္တိ မရှိတဲ့ ဂဏန်းတွေထဲ အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်ခုပ်ထဲကရေ ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးပြီလဲ ... ဘယ်အထိ ဖြစ်ရဦးမလဲ။
၀ါယာရှော့မှတစ်ဆင့် ဂိုဒေါင်အတွင်းရှိ ယမ်းစိမ်း၊ ကန...
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက်တွင် ပေါ...
မြို့ ဝန်ကြီး... ဒါတွေသိပါသလား
အကဲခတ်တွေ မတွေ့နိုင်အောင် အကျဉ်းသားတွေကို ဆီးရီးယာ...
ကင်မ်ဂျုံအီးလ် နာရေးအခမ်းအနား ကျင်းပ
ရွှေဂက်စ် အကျိုးအမြတ် ရခိုင်ပြည်အတွက်လည်း ဖြစ်စေလို...
နိုင်ငံခြားမှ ငွေလွှဲနိုင်ရန် ဧရာဝတီဘဏ် လုပ်ဆောင်နေ...
ကုမ္ပဏီများထူထောင်ရန် ကန့်သတ်ချက်များ ပယ်ဖျက်
ဇာဂနာ ပါတီဝင်ရန် ဦးဝင်းတင် ဖိတ်ခေါ်
ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ ငါးနှစ်အတွင်း 4G အထိ အဆင့်မြှ...
သံယာတော်များ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) ပြုလုပ်ြ...
ချီဖွေ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်...
နိုင်ငံခြားဘဏ် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော မြန်မာဘဏ်များ ...
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဏ အက္ခရာ ကားဟောင...
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ မြန်မာအပါအ၀င် ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား...
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာနှင့်အနီးဆုံး ဆုံမှတ်သို့ အဂ...
မလေးရှားဆေးကျောင်းသား ၏ လိင်တူလက်ထပ်ပွဲ အား မလေးလူ...
ခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်ရုံဖြင့် ရဲ ခေါ်နိုင်မည့် ဖုန်းဆေ...
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး တိုးလုပ်ဆောင်ဖို့ ပုပ...
ပညာရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတပွဲတော် ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ မှာ ကျင်းပ...
ဂျပန် အထောက်အပံ့ မြန်မာ ပြန်ရဖွယ်ရှိ
ပါရမီ ယာဉ်မောင်းများ၏ တောင်းဆိုချက် ဦးပိုင်လိုက်ေ...
ခိုးထားတဲ့ ဒေါ်လာ ၁ သန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာ Hackers အုပ်စ...
မြောက်ကိုရီးယား ခေါင်းဆောင်သစ် အာဏာရပါတီ အကြီးအကဲတ...
ဘူးသီးတောင် ၁၉၉၀ အမတ် လွှတ်ပေးရန် NDPHR တောင်းဆို
ဇင်းကျိုက်မီး ၁၂၄ အိမ် လောင်ကျွမ်း
ရဲဘော်သုံးကျိပ် သွေးသစ္စာနေ့ အလှူ
အီတာလျံ-ထိုင်း ကုမ္ပဏီကား ပြန်ပေးဆွဲအဖွဲ့ KNU အရေးယ...
ထိုင်းရှိ မြန်မာအလုပ်သမားများ အစိုးရ ကူညီမည်
ရထားပေါ်မှာပဲ ဘဝဆုံးတဲ့ ရထားချစ်သူ
EPS စနစ်ဖြင့် အလုပ်သမားစေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နားလည်မှု...
မိုဘိုင်းဖုန်း Sim Card အသစ် ပြန်လည်လျှောက်ထားခြင်...
တရုတ်နိုင်ငံ လိုင်းရင်း ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်း လိုအပ်ချ...
စင်ကာပူ ပင်နီစူလာပလာဇာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာက...
၀က်နားရွက်ပြာရောဂါကို ကူးစက်ရောဂါအဖြစ် တရားဝင်သတ်မ...
၂၀၀၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဆုံး လ...
နိုင်ငံတကာလေဆိပ်သစ် နေပြည်တော်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်
KIO နှင့် ဆွေးနွေးရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်း...
CNF ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရွေးချယ်ပြီးစ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် သီးသန့်တေ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင...
Iron Cross တီးဝိုင်း၏ နှစ်သစ်ကူးည ဖျော်ဖြေပွဲ မျှေ...
'ဥပစ္ဆေဒကံနဲ့ သေရမယ့်ဇာတာ ပါတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့...
မြန်မာ့ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု ရှင်းတမ်း (အပိုင်း ၁)
မှတ်ပုံတင်ကိစ္စ NLD ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် တွေ...
ရွှေည၀ါ ဆရာတော် သတင်း ဆင်ဆာဖြတ်
င၀န်မြစ်တိုက်စားသဖြင့် ရွာလုံးကျွတ် ရွှေ့ရမည့် အခြေ...
ရေကြည်မြို့နယ်အတွင်း ထင်းစိုက်ခင်းမှ ပထမဆုံးအကြိမ်...
ဦးတင်ဦးနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါတီ၏ ပထမနှင်...
ရောင်ခြည်သစ် အခမဲ့ ပညာဒါနကျောင်း ဖွင့်ပွဲ (၂၀ - ၁၂...
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုခများကို နှစ်ဆနှုန်းထား ရော...
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအီ ကွယ်လွန်သွာြး...
မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး ကုန်ရထား၌ ဗုံးတွေ့ရှိပြီးနောက် ...
အာရပ်နွေဦးတော်လှန်ရေး ပေါက်ဖွားစေသော တူနီးရှား စံပ...
မြန်မာ့အရေး ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သူ ချက်သမ္မတဟောင်း က...
အညတရ သူရဲကောင်း ဂုဏ်ပြုပွဲ ဂျပန်မှာ ပြုလုပ်
တိုက်ပွဲ ၆ လအကြာတွင် ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များထံသို...
Ko Myoe (Myanmar sar) – မြန်မြန်ပေး၊ မြန်မြန်ဆပ်
နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၁၁ မီးငြိမ်းစေမယ့်၊ ၁၁ ...
န၀တက တရားဥပဒေ အလွဲသုံးစားလုပ် မဟနက ဘုရားဥပဒေအလွဲသံ...
SNDP ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ သုံးနေရာ ဝင်ပြိုင်မည်
အစိုးရနဲ့ SSA တောင်ပိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဆက်လက်ဆွေ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ၏ ဦးဆောင်အဖွဲ့ သစ်
ပြည်သူတွေ စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်ဆိုရင် ...
ဟနွိုင်းမြို့မှ ၃၃ ထပ်မြင့်သည့် မျှော်စင်ညီနောင်တွ...
အမေရိကန်မှရသော စစ်သင်္ဘောသစ်ကို ဖိလစ်ပိုင်က တောင်တရု...
နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင...
ထားဝယ်စီမံကိန်း တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၄၀၀၀ ထုတ်လုပ်မည့် ကျေ...
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း နောက်ဆုံး...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မီဒီယာများအား ဥပဒေနှင့်အည...
ပြည်ပမှ တင်သွင်းလာသည့် စားအုန်းဆီများအတွင်း ပင်လယ်...
ပြည်ပသို့ ပညာသင်သွားမည့် ကျောင်းသားများ နိုင်ငံခြာ...
World AIDS Day အထိမ်းအမှတ် HIV AIDS Knowledge Fair...
ပြည်တွင်း၌ ပထမဆုံးသော Call Center ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ...
တရုတ်ရိုးရာ ပြက္ခဒိန်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၃ ရက...
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် NLD ပြင်ဆင်
လေဖြန်းသွားသည်ဟု ယူဆရသော ပါကစ္စတန်သမ္မတ ရာထူးနုတ်ထွက...
'ဏ' အက္ခရာကားများ ခေတ္တရပ်နားမည် ဆိုသည်မှာ ကောလာဟလ သ...
ဒီဇင်ဘာ လလယ်ပိုင်းအထိ ကိုရီးယားသို့ မြန်မာလုပ်သား ...
ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာမူဝါဒ အချို့လျှော့ပေ့ါ Relax some Fil...
စီဒီအမ်အေ ၀၉၈၀ နှင့် ၇၂ ဖြင့်စသည့်ဖုန်းများ ၀န်ဆော...
ကချင် ဒုက္ခသည် ကလေးငယ်များ စိတ်ဒဏ်ရာရ
အမျိုးသား ကဇာတ်ရုံကြီး ဘယ်သူရမလဲ
မြန်မာ-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး တရုတ်ကို မထိခိုက်နိုင်
ဒလိုင်းလားမား မြန်မာပြည်လာနိုင်ရန် အရှင် ဉာဏိဿရ စီ...
“လက်နက်ကိုင် ပြဿနာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါ … ပြည်တွင်းစစ်”
မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၇ မှ ၈ နာရီ
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၇ မှ ၈ နာရီ
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၈ မှ ၉ နာရီ
မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် အသံလွှင့်ချိန်များအတွင်းသာ မြန်မာဘာသာဖြင့် ကြားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅း၃၀-၆း၃၀
မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆း၃၀-၇း၀၀
မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆း၀၀-၇း၀၀
မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၉း၀၀-၁၀း၀၀
မြန်မာစံတော်ချိန် ညပိုင်း ၉း၀၀-၁၀း၀၀
နံနက်ပိုင်း | တိုးချဲ့  | ညနေပိုင်း | ညပိုင်း
» ထုတ်လွှင့်ပြီး သတင်းဟောင်းများ
T.Z.T Proxy Server ( ကိုတေ )
ဆုံနေကြ စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ
ဝယ်-ရောင်းနဲ့ အလုပ်ရဖို့ ကြော်ငြာ
သတင်း မီဒီယာများ Eleven Media Group BBC Burma Independent News Agency Burma News International Burma Daily Burma Digest Burma Net Burma Today DVB Hitaing Independent Mon News Irrawaddy Kachin Kaladan Kaowao News Khit Lu Nge Khonumthung News May Kha Mizzima Moemaka Myanmar Times Narinjara The New Era Journal New Light of Myanmar Ngu Yin Pyin NMG Reboun88 Radio Free Asia SHANGroup Snap Shot News Journal VOA Yangon Meida Group Yoma3 Moemaka Myanmar Bloggers
ဥရောပ ကန်ပြီး ပွဲများကြည့်ရန်
မန် ယူ အသင်း
ဆရာတော်များရဲ့ web site များ
ဆရာတော်များ၏တရားဆိုဒ်များသို့ မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး မိုးကုတ်ဝိပဿနာ မင်းကွန်းဆရာတော် သဲအင်းဂူဆရာတော် သီတဂူဆရာတော် မဟာစည်-၁ အေးရိပ်ချောင်မဟာစည်ရိပ်သာ ချမ်းမြေ့ဆရာတော် အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ-ပိုင်းလော့ ဖြူးဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဓ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ပညိဿရ-ဓမ္မဒူတ အရှင်ဆန္ဒာဓိက မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည် ဓမ္မစေတီဦးကောသလ္လ အရှင်ဇဝန-၁ အရှင်ဇဝန-၂ ဆရာတော်ဦးဝိဇယ ဓမ္မဒေါင်းလုပ် ဓမ္မရံသီ ဓမ္မဒါန ဓမ္မပေါင်းချုပ် E-Dhamma Burmese Classic တရားများ နိဗ္ဗာန်န တရားတော်များ-၁ တရားတော်များ-၂ ချယ်ရီမြေ
တူဒေး အဖွဲ့ 
ကျွန်တော် သွားရောက် လည်နေကြ
ဖတ်ကြည့် စေချင်တာတွေ.. မျိုးချစ်..အာဇာနည်. ကဗျာသီတဲ့ ကြိုး ကဗျာများ ကလိုစေးထူး ကဒေါင်းညင်သာ ကိုဈာန်.. ကိုဇင် ကိုထိုက် ကိုမိုးသီးဇွန် နစ်နေမန်း ရသတွေပြော.ဟာသနှောတဲ့ ကိုပေါ ကိုဖိုးဇေ ကိုမောင်ရင် ခင်မင်းဇော် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် ဂျစ်တူး စမိုင်းမေ စုစုကဗျာ စနေဂြိုလ်မင်း ဆုံစည်းရာ ဆောင်းယွန်းလ ကြောက်မွေးပါရင်နှုတ်မဲ့ ဇာကနာ ဇော်ဘားမား ညလေး တက်စလာ တီဇီအမ် တီဇီအေ တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ ဒီတော့...ဘာဖြစ်လည်း.. ဒီရေ.. ဒေါင်းကွင်းမှ..ဒေါင်းကလေး နေခြည်ဦး နှင်းခါးမိုး ပန်းဗေဒါ ပန်းနုရောင်သွေး..ညီမလေး ပန်ဒိုရာ ပုဂံသား ပုထုဇဉ် မဖြူဖြူသင်း ဖို့ ဝိန်းမှသူရဲကောင်းများ.. ဘာညာဘာညာ ဘယ်ညာညီညီလှမ်း..ပန်းတိုင်လမ်းသို့ဘုန်းဘုန်း ဘားမားတူဒေး မာယာမဂ္ဂဇင်း မင်းမင်း ဆရာမ မေငြိမ်း တေဇာ ဘလင့် မျောက်ရကောင် မျိုးဆက်အမှတ် (၅) မယ်လိုဒီမောင် မြန်မာဘလူး မြန်မာလူငယ်အနုပညာရှင်များအဖွဲ့ ကိုရန်အောင် လူသစ် လေးမ လင်းလက်ကြယ်စင် လွတ်လပ်စေမည်..အမိမြန်ပြည် သမိုင်းထဲကရက်စွဲများ သာလှဦး၏..ပေါက်ကွဲသံစဉ်ကဗျာများ သီရိလင်္ကာရောက်သံဃာတော်များ ကိုသင့် အမိမြန်မာပြည်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာများ မျိုးချစ်မြန်မာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ၉၆ မျိုးဆက်များ အနုပညာ.ပြခန်းကလေးတခု လွတ်မြောက်ရေးရောင်နီ။ လင်းလက်မဲ့ မြန်မာပြည်။ အရှင်မေတ္တာစာရ အသားထဲမှ..လောက်ကောင်များ အိမ်မက်အိမ်ကလေး ဥဒါန်းသစ် စာမျက်နှာ စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား MM THINKER ကိုလျှာရှည် ကောင်းကင်ကို ဒေါင်းမာန်ဟုန် အမေ့အိမ်
Copyright © 2011 ဆုံနေကြ | Powered by Blogger